Khatimidda Dalxiiska Dalxiiska ee Badbaadada ah ayaa fure u ah inay soo booqdayaashu soo noqdaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Khatimidda Dalxiiska Dalxiiska ee Badbaadada ah ayaa fure u ah inay soo booqdayaashu soo noqdaan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Investments • LGBTQ • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon
Waa wax fudud, waxtar leh, oo gaar ah. Dib-u-soo-celinta Barnaamijka Khatimidda Dalxiiska ee Dalxiiska ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka. WTN waxay rajeyneysaa Khatarta Dalxiiska ee Safer inay noqoto heerka cusub ee caalamiga ah ee helitaanka meel, hudheel, iyo daneeyayaal kale oo ammaan u ah booqdayaasha.
Barnaamijka Khatimidda Dalxiiska ee Badbaadada Cusub ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa dib loo bilaabay 1dii Luulyo. Barnaamijka waxaa la joojiyay bishii Janaayo si loo darso khatarta COVID-19 ee ku wajahan warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Khatimidda Dalxiiska Dalxiiska ee cagaaran, buluugga ah, iyo casaanka ah waxay ka tarjumaysaa heerarka tallaalka, shuruudaha baaritaanka iyo heerarka kiisaska. Waxay leedahay dhammaan agabyada fudud si ay u noqdaan heer cusub oo lagu cabbiro caalamiga. Waxaa loogu talagalay in lagu soo celiyo ganacsiga lana helo kalsoonida qofka safarka ah, meesha loo socdo iyo shaqaalaha.
Khatarta Dalxiiska Dalxiiska ee loogu talagalay meelaha loo safrayo iyo daneeyayaasha ayaa hadda si buuxda loogu heli karaa xubnaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka, oo ah ururka ka dambeeya dib-u-dhiska safarka, fududeynta doodda ugu horreysa ee caalamiga ah ee COVID-19 ee lala yeelanayo daneeyayaasha safarka iyo dalxiiska iyo meelaha ay tagayaan.
Badbaadada safarka iyo amniga waxay kuxiranyihiin bixiyaha iyo kan wax qaata labadaba, waxayna qaadataa hogaamin. Markaan garowsaday xaqiiqadan, Dib u Dhiska Safarka waa dooddii ugu horreysay ee caalami ah ee ku saabsan halista COVID-19.
Waxaa aasaasay eTurboNews, Dalxiiska Nabdoon, PATA, ka Guddiga Dalxiiska Afrika, Iyo Guddiga Dalxiiska ee Nepal dhinaca dhinaca bandhigii ganacsiga ee ITB ee la joojiyay ee ka socday Berlin bishii Maarso 8, 2020. ITB waligeed ma dhicin, laakiin waxay ahayd dib u dhiska quraacda safarka wuxuu ahaa bilowgii in ka badan 200 + wadahadallo zoom ah oo lala yeelanayo daneeyayaasha adduunka.
Dr. Peter Tarlow ama Dalxiiska Safer wuxuu ka digay dhibaatada COVID-19 ee soo ifbaxeysa dhacdadii bilaabista Safer Travel ee fariin muuqaal ah oo la duubay Febraayo 2020.
Bishii Diseembar ee 2020, Dib-u-dhiska.rajo abuuray Shabakada Dalxiiska erayga (WTN), urur isku xirka oo ay la socdaan ku dhowaad 1,500 xubnood oo ka tirsan warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee 127 dal.
WTN ayaa abuuray Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon loogu talagalay meelaha daneeyayaasha safarka iyo safarka iyo dalxiiska bisha Luulyo ee sannadka 2020. The Jamaica Dalxiiska Guddiga ayaa ahaa meeshii ugu horeysay ee la tago la siiyay shaabaddii July 9, 2020, waxaana ku xigay Guddiga Dalxiiska Kenya.
Goorma WTTC waxay ku dhawaaqday in ka badan boqol meelood meel ay ka heleen shaabadda dalxiiska ee hay'addaas badbaado leh, Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa go'aansatay ka dib markii la sameeyay inay dhigto Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon si aamusnaan ah u joogso si loogu oggolaado faham cad oo ku saabsan COVID-19 iyo halista soo booqdayaasha iyo warshadaha dalxiiska.
Markii la hirgeliyey barnaamijka tallaalka, iyo dalxiiska duubista ee ka soo ifbaxaya suuqyada waaweyn oo ay ka mid tahay Hawaii, Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay go’aansatay inay dib u soo celiso Khatarta Dalxiiska Safer mar kale 1da Luulyo, 2021, hal sano ka dib markii markii hore la abuuray.
Gudoomiyaha ahna aasaasaha WTN Juergen Steinmetz ayaa yiri: “Waxaa muhiim noo ah inaan abuurno barnaamij runtii ku kasban kara kalsoonida safarka, meelaha uu tagayo, daneeyayaasha, iyo kuwa ka shaqeeya waaxdan caalamiga ah.
“Ma lihin meelihii dib loogu noqon lahaa oo aan ku geli lahayn qiimeyn faahfaahsan. Waxaan u maleynayaa in Tambarka WTTC uu shaqo weyn ka qabtay isku dhafka xogta oo faahfaahsan isla markaana dadka heysta shaabaddu ay ka hubiyaan waxyaabaha ay u degsan yihiin ama ay ku tagayaan shirkadda, si ay u helaan oggolaanshaha WTTC. Waxaan u qaadanay barnaamijka Hawaii ee Safarka Badbaadada ah tusaale, fariinteenuna waa mid fudud. Tallaalka, tijaabooyinka, iyo faafitaanka fayrasku waa lambarrada aan si fudud u cabbiri karno ka hor inta aan la siinin Khatarta Dalxiiska Dalkeena.
”Shaabadda WTTC iyo shaabadda WTN way is ammaanayaan. Fikrad ahaan, shirkad kasta oo uqalantay inay hesho shaambadeena marka hore waa inay dalbataa shaambada WTTC labaad. Goob kasta oo loo socdo ama shirkad kasta oo sidata shaabadda WTTC waxaa laga yaabaa inay rabaan inay codsadaan shaabadeena xiga. Farriinta WTTC waxay ku saleysan tahay faahfaahinta ganacsiga ama meesha loo socdo, waxaan si fudud diiradda u saareynaa xaaladda hadda jirta iyo natiijooyinka.
“Waxay hubin laheyd shuruudaha aasaasiga ah ee ka shaqeynta meel amaan ah hada la buuxiyo, ka hor inta aan laga shaqeyn faahfaahinta iyo daabacaad yar.
“Waa inaan kalsooni ku qabnaa in qof kasta oo hela shaabaddayada uu awood u leeyahay inuu kobciyo dalxiiska laga bilaabo halkan. Waxaad kuheleysaa dhammaan faahfaahinta howlgalka hudheelka meesha, laakiin markii aad u socotaa aan weli ammaan ahayn, waxaas oo dhami wax badan maahan.
“Iyada oo maalin walba ay yimaadaan dalxiisayaasha Hawaii, taasi way ka sarreysaa marka loo eego maalmaha ugu sarreeya sannadka 2019, in kasta oo aan safar caalami ah la helin, Hawaii waxaa loo arkay inay tahay tusaale guul. Qaabka Hawaii wuxuu nabad geliyay qof kasta oo ka tirsan Gobolka iyo booqdayaasha.
“Waxaan dareemeynaa kalsooni inaan ku tiirsanaano sheekadan guusha ee Hawaii iyo inaan helno qodobada muhiimka ah ee nooca Hawaii oo lagu daro shuruudaheena Badbaadada Dalxiiska Safer ayaa macno badan sameynaya. “
Seal Dalxiiska Safer (STS) wuxuu ku dhisan yahay shahaadooyin la aasaasay iyada oo loo marayo qiimeyn iyo oggolaansho. Shaabaddu waxay bixisaa dammaanad dheeraad ah markaad safreyso xilliyadan aan la hubin. STS waxay ka caawisaa meelaha la tagayo iyo daneeyayaasheeda iyadoo loo marayo liis hubin oo dhibco badan leh oo xaalada guud ee meeshaada ganacsi ah.
Khatarta Dalxiiska Dalxiiska ee Safer waxaa si gaar ah loogu heli karaa xubnaha Shabakada Dalxiiska Adduunka. The Safarka Dalxiiska ee Nabdoon loogu talagalay dadka safarka ah, ee Abaalmarinta Geesiyaasha sidoo kale waa loo heli karaa qof kasta.
Ka duwanaanshaha kale ee Seal ama Shaambadda, Shabakadda Dalxiiska ee Dalxiiska Dalxiiska Dalxiiska ayaa leh shuruud fudud oo ku saleysan heerarka tallaalka, shuruudaha baaritaanka, xirashada maaskarada, sharciyada kala fogeynta bulshada, iyo lambarrada infekshanka ee COVID oo ay weheliso is-qiimeyn ka socota kuwa codsanaya Khatimidii Dalxiiska ee Nabdoon.
WTN waxay bixisaa saddex shaabadood:
Khatarta Dalxiiska Dalxiiska ee GREEN
diyaar u ah meelaha loo socdo iyo daneeyayaasha. Waxay si adag ugu saleysan tahay qiimeyntaada iyo AFAR ka mid ah shuruudaha ugu hooseeya ee soo socda ee ku aaddan meesha aad u socoto
1) 25% heerka tallaalka ee dadkaaga
2) Tijaabinta xun ee COVID-19 ama tallaalka looga baahan yahay booqdayaasha imanaya
3) Kiiskaaga 7-maalmood kiiskiiba 100,000 qofkiiba wuxuu ubaahan yahay inuu kayaryahay 9 celcelis ahaan maalintii.
4) Maaskaro xiran
5) Kala fogaanshaha bulshada.
Khatarta Dalxiiska Dalxiiska ee Badbaadada Buluugga ah
Qiimeyntu waxay ku saleysan tahay qiimeyntaada iyo mid ka mid ah 2 xaaladood ee soo socda:
1) Meesha aad u socoto waa inay lahaataa 50 +% heerka tallaalka ee dadkaaga OO martidaadu waa inay muujiyaan tallaal buuxa ama baaris aan fiicnayn oo COVID-19 ah ka hor intaadan imaan waddankaaga, gobolkaaga, ama gobolkaaga IYO heerkaaga 7-maalmood ee kiiskiiba 100,000. dadka ka yar 7 maalin kasta; maaskaro-xirashada gudaha iyo fogaanshaha bulshada
2) AMA Meesha aad u socoto waa inay lahaataa 60 +% heerka tallaalka IYO heerkaaga 7-maalmood ee kiiskiiba 100,000 ee qof wuxuu u baahan yahay inuu ka yaraado 5 celcelis ahaan maalin kasta
3) Kala fogaanshaha Bulshada
Khatarta Dalxiiska Dalxiiska ee RED Safer
la qiimeeyay & la ansaxiyay:
Iyada oo ku saleysan qiimeyntaada oo ay ansixiyeen khabiirada amniga ee WTN iyo xubnaha WTN iyo labada soo socda:
1) Meesha aad u socotaa waa inay lahaataa 70 +% heerka tallaalka ee dadweynahaaga
2) 7-maalin qadarka kiisaska 100,000 oo qof wax kayar 3 maalin kasta
Kooxda khabiirka ah ee WTN waxay hagaajin karaan shuruudaha ku saleysan xogta madaxbannaan iyo qiimeynta.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Khatarta Dalxiiska Dalxiiska, iyo si aad u dalbato ka eeg www.safertourismseal.com